Halkee ayay marayaan wadahadala ONLF iyo Itoobiya? - Worldnews.com
Waxaa maalintii seddexaad galay wadahadalo magaalada Nairobi uga furmay jabhadda ONLF iyo Dowladda Itoobiya, waxayna ka socdaan goob qarsoodi ah. Afhayeenka ONLF...
Maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlay wadahadallada Itoobiya iyo ONLF
Maamulka dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya ayaa soo dhaweeyay heshiis dowladda Itoobiya ay la gashay jabhadda hubeysan ee ONLF oo muddo dheer dagaal kula jirtay...
Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo Dhulka Xukuumadda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Salaad ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaalkii u dambeeyay waday qorshaha ay kula soo...
Wada hadalada u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo Jabhadda ONLF ayaa maalintii 3aad galay, iyadoo wafuud labada dhinac ka kala socday uu shir uga socdo goob qarsoodi ah oo ka...
Wareysi: Wada-hadallada Itoobiya iyo ONLF
Magaalada Nayroobi ee dalka Kenya waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay wada hadal u dhaxeeyay ONLF iyo Itoobiya. ......
ONLF iyo Itoobiya oo Asmara Heshiis ku Saxiixdey
Dawlada Itoobiya iyo ONLF ayaa maanta magaalada Asmara ee dalka Iritariya ku kala saxiixday heshiis dhawr qodob ah. ......
Halkee ayay maraysaa Baarista Kiiska Qalbi Dhagax?
MUQDISHO, Somaaliya - Gudigii dhawaan Baarlamaanka Federaalka Somaaliya u xilsaarey baarista Kiiskii Cabdikariim Sheekh Muuse "Qalbi Dhagax" ayaa fahfaahin ka bixiyayy halka ay u marayso howsha loo igmaday. Xildhibaan Ludhfi Maxamed Shariif, oo kamid ah Xubnaha Gudiga ayaa sheegay in hada ay magacaabeen Guddoomieye, Guddoomiye ku xigeen iyo Xoghaye, si howshooda ay u dardar...
Maxay ku heshiiyeeen Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea
Asmara, Sebtembar 06, 2018:Iyada oo la tixgelinayo in dadyowga Itoobiya, Soomaaliya iyo Ereteriya ay wadaagaan deegaan, taariikh, dhaqan, diin iyo danno muhiim ah; Iyada oo la qaddarinayo madaxbannaanida dowladeed, dhuleed iyo siyaasadeed ee wadanka kasta; Iyaga oo xoojinaya xiriirkooda taariikhiga ah si ay u gaaraan...
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay aragtideeda ku aadan Wadahadallada magaalada Nairobi uga socda Ururka ONLF iyo dowladda Itoobiya. Axmed Ciise Cawad, Wasiirka Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan Wadahadalka labada dhinac, oo uu sheegay inuu yahay tallaabo loo qaaday dhanka nabada gobolka Geeska...
6 Sebtembar 2017...